ဓမ္မဂင်္ဂါ: ဓမ္မဂင်္ဂါပါဠိသင်ခန်းစာ (၇)
အသရဆုံး ပုလ္လိင်နာမ်ပုဒ်များ (Masculine nouns ending in-a)
ပစ္စုပ္ပန်ကြိယာများ (Verbs in Present Tense)
ဇီဝတိ (အသက်ရှင်၏၊ အသက်မွေး၏)
ဥတ္တရတိ (တက်၏၊ရေထဲမှ ပေါ်လာ၏)
ဒီနေ့တော့ မြန်မာစကားမှာ ၌၊ မှာ၊ တွင်၊ ၀ယ် ဆိုတဲ့ နေရာပြပုဒ်တွေကို သင်ရမယ်..။ မေးခွန်းလေး မေးတတ်အောင် စာလုံးလေးတွေ အပိုမှတ်လိုက်ပါဦး..
ကတ္ထ (ဘယ်နေရာမှာ) Where (in which place)?
ကုတော (ဘယ်နေရာမှ ) From where (from which place )?
မင်း ဘယ်က လာသလဲ (ကုတော အာဂစ္ဆသိ တွံ) (Where do you come from?) လို့
မေးတာကို သင်ခန်းစာ (၄) ပိုင်ရင် ဖြေတတ်သွားပြီ..။ (မပိုင်ရင် ဆရာနဲ့ မဆိုင်...)
အဟံ မရမ္မရဋ္ဌသ္မာ အာဂစ္ဆာမိ (ငါ မြန်မာနိုင်ငံက လာတာပါ) (I come from Myanmar)..။
မေးတဲ့ လူကတော့ ဆက်မေးဦးမှာပဲ..။
ကတ္ထ တွံ ၀သသိ (မင်း ဘယ်မှာနေသလဲ) (where do you live?)
အဲဒီမေးခွန်းကို ဖြေဖို့အတွက် သိပြီးသားပါဠိစကားလုံးလေးတွေကို နေရာပြဖြစ်အောင် ဖန်တီးကြဦးစို့..။ မြန်မာစကားမှာ ရွာ၊ ကျောင်း၊ မြို့ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးတွေ နောက်က ၌၊ မှာ၊ တွင်၊ ၀ယ် တစ်ခုခု ထည့်လိုက်ရင် ရွာ၌၊ကျောင်း၌ ၊ မြို့၌ ဆိုတာမျိုး နေရာပြပုဒ်လေးတွေ အလွယ်တကူဖြစ်သွားသလို
သ္မိံ (smim) , မှိ (mhi,)ဧ ( e) သုံးမျိုးထဲက တစ်မျိုးကို ဆက်ပေးပါ..။
အဟံ ၀ိဟာသ္မိံ ၀သာမိ ( ၀ိဟရာမိ )။
ငါသည် ကျောင်း၌ နေထိုင်၏။
ဘုရင်သည် နန်းတော်၌ စံနေတော်မူ၏။
ဘူပါလော ပါသာဒေ ၀သတိ။
လယ်သမားသည် ရွာ၌ နေထိုင်၏။
ကဿကော ဂါမေ ၀သတိ။ စသည် စသည်....
ဧသု (esu )တစ်ခုတည်း ဆက်ရုံပါပဲ..။
၀ိဟာရ+ဧသု= ၀ိဟာရေသု (ကျောင်းတို့၌)
ဂါမ+ဧသု= ဂါမေသု (ရွာတို့၌)
မယံ ၀ိဟာရေသု ၀ိဟရာမ (ငါတို့သည် ကျောင်းတို့၌ သီတင်းသုံးတော်မူကြ၏)
ငါတို့ ကျောင်းတွေမှာ နေကြတယ်ပေါ့လေ...။ ရလောက်ပါပြီ..လူဝါးဝတာတော့ မကောင်းဘူး စာဝါးဝတာတော့ ကောင်းတယ် တဲ့..။ ရွာက ငယ်ဆရာဘုန်းကြီးပြောဖူးတာ အမှတ်ရတယ်..။
လေ့ကျင့်ခန်းလေးတော့ ပေးလိုက်ပါဦးမယ်..(မလုပ်ချင်မှန်းသိသော်လည်း အဟမ်း ဆရာတို့ ၀တ္တရားရှိသည့်အားလျော်စွာ...;)...
ခြင်္သေ့သည် တောင်ပေါ်ရှိ ကျောက်ဆောင်၌ ရပ်၏။ (ရှိ-ကိုလည်း ၌ ကဲ့သို့ စဉ်းစားပါ..။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ at နဲ့ in လို နေရာနှစ်ခု ပါနေသလိုမျိုး)
သူခိုးတို့သည် ဆရာ၏ အိမ်သို့ ၀င်ကြကုန်၏။
ကလေးတို့သည် လမ်းမှ ပင်လယ်သို့ သူငယ်ချင်းများနှင့် အတူ ပြေးကြကုန်၏။
ဦးကြီး၏ နွားတို့သည် လမ်းပေါ်တွင် လှည့်လည်နေကြ၏။
ငှက်တို့သည် သစ်ပင်ပေါ်တွင် နားနေကြ၏။ (ထိုင်နေကြ၏)
နွားသည် ခြေဖြင့် ဆိတ်ကို ကန်ကျောက်၏(ပုတ်ခတ်၏)
မြေခွေးများသည် တောင်ပေါ်၌ နေကြ၏။
ဘုရင်သည် ဘုရားရှင်ကို ၀န်ကြီးများနှင့် အတူ ရှိခိုး၏။
ဦးလေးသည် သားနှင့်အတူ အိပ်ရာပေါ်တွင် အိပ်၏။
တံငါသည်သည် လယ်သမား၏ အိမ်တွင် ထမင်းကို စား၏။
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 12:28 AM